Global Voices teny Malagasy » Blog Action Day 2011: Andao Hiresaka Momba Ny Sakafo · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 13 Oktobra 2011 6:46 GMT 1	 · Mpanoratra Diego Casaes Nandika Lalatiana Rahariniaina
Sokajy: Fampandrosoana, Hafanàm-po nomerika, Hevitra, Mediam-bahoaka, Sakafo, Tontolo_iainana, Zavakanto & Kolontsaina
Ny Blog Action Day  dia hetsika fanao isan-taona izay iarahan'ireo mpitoraka bilaogy eran-tany manoratra mikasika olana iray ao anatin'ny andro iray. Ny tanjona dia ny hametrahana fampahatsiarovan-tena sy ny hitarihana adi-hevitra eran-tany mikasika ny olana goavana iray izay miantraika amintsika rehetra.
Ny Global Voices dia nanao tatitra momba ireo Blog Action Day nisy teo aloha ary nanampy tamin'ny fizarana tantara fohy toy ny momba ny Rano tamin'ny 2010  sy Fiovan'ny Toetr'andro tamin'ny 2009 . Ny lohahevitra amin'ity taona ity dia ny sakafo, satria ny Blog Action Day dia mifandraika amin'ny Andro iraisam-pirenenena ho an'ny sakafo , hetsika iray karakarain'ny Sampan'ny Firenena Mikambana momba ny Sakafo sy ny Fambolena.
Ireo mpanoratra ao amin'ny Global Voices dia efa nanoratra betsaka mikasika ny sakafo. Vao haingana, ny tatitra manokana momba ireo Tanjon'ny Firenena Mikambana ho an'ny Fampivoarana ny Taonarivo amin'ny 2011  dia ahitàna andian-dahatsoratra momba ny ady amin'ny kere sy ny fahantrana. Nangatahana ihany koa ny fikambananay hanao andian-dahatsoratra momba ny Tsy Fanjariana Ara-tsakafo  miaraka amin'ny Pulitzer Center momba ny Fitaterana ny Olana. Ny tatitray dia nalaina tamin'ny fandraisan'anjaran'ny fahampahalalam-baovaon'olon-tsotra ary asongadina ao amin'ny Pulitzer Gateway to Food Insecurity  (Vavahadin-tseraseran'ny Pullitzer momba ny tsy fahampian-tsakafo).
Ao amin'ny tranokalan'ny Blog Action Day ny fanasana izay misokatra ho an'ny rehetra manana Bilaogy. Hitanao ato ny lisitr'ireo lohahevitra naroso , ary ny sasany amin'izy ireo dia mahakasika ny kere amin'ny faritr'i Afrika Atsinanana, hanoanana sy fahantrana, tsy fahampian-tsakafo sy ady ara-tsakafo.
Raha liana ianao, vakio misimisy kokoa ny momba ny Sakafo avy amin'ny fomba fahitàn'ny vondrom-piarahamonin'ny Global Voices .
Misoràta anarana amin'ny Blog Action Day amin'ny alàlan'ny famenoana ity pejy ity , ary aza adino ny manaraka ny @BlogActionDay  ao amin'ny Twitter.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/10/13/23689/
 Rano tamin'ny 2010: https://globalvoicesonline.org/specialcoverage/2010-special-coverage/blog-action-day-2010-water/
 Fiovan'ny Toetr'andro tamin'ny 2009: https://globalvoicesonline.org/2009/10/15/reading-the-world-on-blog-action-day/
 Andro iraisam-pirenenena ho an'ny sakafo: http://www.fao.org/getinvolved/worldfoodday/en/
 Tanjon'ny Firenena Mikambana ho an'ny Fampivoarana ny Taonarivo amin'ny 2011: https://globalvoicesonline.org/specialcoverage/un-millennium-development-goals-in-2011/
 ato ny lisitr'ireo lohahevitra naroso: http://blogactionday.org/why-food/
 avy amin'ny fomba fahitàn'ny vondrom-piarahamonin'ny Global Voices: https://globalvoicesonline.org/-/topics/food/
 famenoana ity pejy ity: http://blogactionday.org/register-for-blog-action-day/